September 4, 2021 September 4, 2021 by lectionary
TOOZDEE IZU UKA NKE ABUO N’OGE NCHETA AHUHU KRISTI
Chineke bu so jhunaanya, mee ka anyi loghachikwute Gi. Zidata Mmuo Gi ka O mee ka anyi kwudosie ike n’okwukwe na n’ezi oru. Site na n’ez na Dinwenu anyi Jesu Kristi ..
Ihe Ogugu nke mbu: 17:5-10
Yahweh kwuru si, “Omuma ikpe diiri onye nke tukwasara obi na mmadu, onye chekwubere naani n’ike aka mmadu, onye obi ya juru Chineke. Dika obere osisi nke puru n’ikpa enweghi iheoma ga esi na ya puta. O ga-ano n’ala kporo nku nke ikpa ahu, n’ala nnu mmadu ebighi. “Ngozi diri onye ahu nwere nchekwube na Chineke, onye nchekwube ya bu na Yahweh.
O dika osisi a kuru n’akuku mmiri, nke gbanyere mgborogwu na mmiri, o naghi atu egwu okochi n’ihina akwukwo ya na-adi ndu mgbe niile. O dighikwa atu egwu n’oge uko mmiri, o na-ami mkpuru oge niile.” Obi mmadu di aghugho karia ihe niile, o juputakwara n’ajo ihe, onye ga-aghotali ihe di ya n’ime? “Munwa Yahweh na-enyocha obi na-atulekwa echiche iji kwu onye obula ugwo dika oru ya siri di.”
ABUOMA NA AZIZA: Ps:1:1-2, 3, 4, 6.
AZIZA: Añuri ga-adiri ndi tukwasara obi na Dinwenu.
Añuri ga-adiri nwoke ahu nke anaghi eso ndumodu onye ajo omume,
ma o bu na-akwughari n’uzo ndi ome njo, ma o bu nodu n’otu ndi na-ekwuto Chineke;
Kama O na-enwe añuri n’ebe iwu Onyenweanyi di; ma na-achighari iwu ya n’obi ya ehihie na abali. Az./
O dika osisi a kuru n’akuku iyi,
ihe niile o na eme na-agara ya nke oma. Az./
Mba, n’ihina ha dika afuru oka nke ikuku na-ebughari.
MBEKU: Jn 11: 25,26.
Abu m mbilite n’onwu na ndu, onye obula kwere na m, agaghi anwu ma oli. Az./
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Luk dere
Jesu gwara ndi Pharisee si: “O di otu onye ogaranya nke na-eyi akwa uhie-uhie na ezi akwa ocha onye na-ano n’oriri na oñuñu ubochi niile O nwere otu ogbenye onya juru n’ahu, a na-akpo Lazaros nke na-atogbo n’onu uzo ama ya. Ihe di ya mkpa bu iri iperipe nri si n’oche nri eze dapu. O buladi umu nkita na-abia aracha ya onya. Mgbe ogbenye a nwuru ndi mmuooma buuru ya buga n’akuku Abraham n’ala mmuo, ogaranya ahu nwukwara, e lie ya. Mgbe o no n’okummuo na ahuju anya o letiri anya hu Abraham n’ebe di anya ka Lazaros no n’akuku ya. O tiri mkpu si: ‘Nna anyi Abraham, biko, mere m ebere. Zitenu Lazaros ka o detu onu mkpisiaka ya na mmirid mejuo ire m, n’ihina ano m n’ahu-ufu n’etiti ire oku nke a. Abraham zara ya si ‘Nwa m, cheta na mgbe i no n’uwa, i nwetara ezi ihe nke gi, n’otu aka ahu Lazaros nwetara soso ahuhu.
Ma ugbu a, a na-akasi ya obi n’ebe a, ma gi onwe gi no n’ahu-ufu. N’agbanyeghi ihe ndi a niile, e mere ka oke olulu di n’etiti anyi na unu, ka ndi choro I si ebe a biakwute unu ghara inwe ike, ka onye obula gharakwa I si ebe ahu biakwute anyi’. O riokwara si, ‘Ebe o di otu a, biko, ario m gi ka i ziga ya n’ulo nna m, n’ihi na enwere m umunne ise ka o doo ha aka na nti ka ha onwe ha ghara i bata n’ebe mmekpahu a.’Abraham zakwara ya si ‘Ha nwere iwu Mosis na ndi amuma., ha gee ha nti. Ma ogaranya ahu zara ya si, ‘Ee, nna anyi Abraham, a si na otu onye ga-esi n’ala ndi nwuru anwu gakwuru ha, ha ga-echeghari.’ Abraham gwakwara ya si, Ọ buru na ha anughi olu Mosis na nke ndi amuma, ha agaghi echeghari, obuladi ma otu onye si n’ala ndi nwuru anwu bia gwa ha.”
Dinwenu, anyi na-ario ka aja nke a gozie emume lenti anyi. Ka ya bu aja kwalitekwa ezi ncheghari n’ime anyi. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.
Dinwenu, mee ka aja nke a anyi hunyerela Gi kwalite okwukwe anyi ma putakwa ìhè n’ihurita onwe anyi n’anya. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.